खाडीचौर–चरीकोट सडकका कारण माथिल्लाे तामाकाेसी प्रभावित - UrjaKhabar Urja Khabar - Nepal's No. 1 energy based online portal.
खाडीचौर–चरीकोट सडकका कारण माथिल्लाे तामाकाेसी प्रभावित
फागुन ०५, २०७४ 1934 सागर केसी/दोलखा
ठेकेदारको ढिलासुस्ती र लापरबाहीका कारण विस्तार तथा स्तरोन्नती भइरहेको खाडीचौर–चरीकोट सडक दुई वर्षमा आधा काम भएको छ । समयमा काम नहुँदा माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाका लागि बर्खामा उपकरण ढुवानीमा समस्या उत्पन्न हुँदैछ ।
४ सय ५६ मेगावाट राष्ट्रिय गौरवको उक्त आयोजनाबाट अबको एक वर्षमा विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ । तर, बाटोकै कारण उपकरण ढुवानीमा समस्या हुँदा विद्युत् उत्पादन मिति धकेलिने सम्भावना बढेको छ ।
काम पूरा भएर हस्तान्तरण गर्ने समयमा आधा काम हुनुमा सडक विभागको लापरबाही देखिन्छ । काम सुस्त हुँदा यात्रु र स्थानीयले धुलो तथा हिलोको सामना गर्नुपरेको छ । समस्या बढ्दै जाँदा स्थानीयले आयोजना पक्षलाई दबाब दिन थालेका छन् । परिणामः खाडीचौर १ किलोमा एक साता अघि २ दिन सडक बन्दै भयो ।
कामलाई तीव्रता दिनेबारे आयोजना व्यवस्थापन र निर्माण व्यवसायीबीच सर्वपक्षीय छलफल पनि भएको छ । सडक विस्तार आयोजना प्रमुख केदार नेपालले निर्माण व्यवसायीकै कारण कामको प्रगति हुन नसकेको बताए ।
तस्बिर : सागर केसी
काममा ढिला भएपछि दोलखा र सिन्धुपाल्चोकका सांसद, गाउँपालिका अध्यक्ष, आयोजना पक्ष, परामर्शदाता र निर्माण व्यवसायीबीच पनि संयुक्त छलफल भएको छ ।
भारतीय एक्जिम बैंकको ऋणमा सडक विस्तार भइरहेको छ । समयमा काम नहुँदा दोलखा र रामेछाप आउजाउ गर्ने हजारौं यात्रु दैनिक कष्टकर यात्रा गर्न बाध्य छन् ।
दोलखाका प्रतिनिधिसभा सांसाद पार्वत गुरुङले बहाना नबनाई समयमा काम पूरा गर्न सम्बन्धित पक्षलाई आग्रह गरे । सिन्धुपाल्चोकबाट निर्वाचित प्रदेश सांसद सरेस नेपालले पनि समस्या भए जनप्रतिधिले सहयोग गर्ने तर काममा ठग्न नपाइने बताए ।
अरनिको राजमार्गस्थित खाडीचौर–लामोसाँघु–जिरी सडकको खाडीचौर–चरीकोट ५५ किलोमिटर खण्डको काम २ प्याकेजमा भइरहेको छ । पहिलो २४ महिनामा पूरा गर्ने गरी २०७२ भदौमा सम्झौता भएको हो । तर, काम नसकिएपछि एक वर्ष म्याद थपिको छ ।
थपिएको समयको थप रकम नपाएको भन्दै ठेकेदारले ४ महिनादेखि काम रोकेको थियो । अहिले सुचारु भए पनि लक्ष्यअनुसार भएको छैन । हिउँद काम गर्ने समय हो । तर, यही बेला ठेकेदारले अनेक बाहना बनाइरहेको छ ।
कामलाई तीव्रता दिने विषयमा सडक विभाग तथा सरोकारवाला निकाय पनि जिम्मेवार हुन सकेका छैनन् । दुवै प्याकेजमा ५१ प्रतिशत कामको जिम्मा भारतीय कम्पनीको हो । उसले स्वदेशी ठेकेदारलाई नै जिम्मा लाएको छ ।
खाडीचौर–मुडे २५ किलोमिटरमा भारतीय कम्पनी सिमाञ्चल, नेपाली कम्पनीहरू गौरीपार्वती र सुनौला खिम्तीले ठेक्का पाएका छन् । ३९ करोड २६ लाख ५२ हजार रुपैयाँमा यो खण्डको ठेक्का भएको थियो । ६० प्रतिशत भुक्तानी भए पनि काम सन्तोषजनक छैन ।
त्यस्तै, मुडे–चरीकोट ३० किलोमिटर भारतीय कम्पनी सकिल हैदर संगथको साझेदारीमा शंकरमाली, सुनौला खिम्तीले पाएका छन् । यसको ७० करोड ७० लाख ३४ हजार रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।
दोस्रो प्याकेजको काम २०१८ मार्चसम्म पूरा गर्नुपर्छ । तर, पहिलो प्याकेजमा समय थपिएकाले दोस्रोमा पनि केही थप हुने नेपालले बताए । सडकको परामर्शदाता कम्पनी इटेको नेपालका टिम लिडर राजाराम काफ्लेले चरीकोट क्षेत्रमा केही विद्युतीय पोल हटाउनेबाहेक अन्यमा समस्या नरहेको बताए ।
सडक विस्तार सुरुमा साँढे ५ मिटर चौडा बनाउने गरी ठेक्का सम्झौता भएको थियो । अहिले ७ मिटर चौडामा काम भइरहेको छ । सम्झौताभन्दा बढी कामको भुक्तानीका लागि १५ प्रतिशतसम्म विभाग र सोभन्दा बढी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाटै मूल्याकंन हुने जनाइएको छ ।
२ मध्ये सबैभन्दा बढी पहिलो प्याकेजमा र २५ देखि ४० किलोमिटर क्षेत्रमा प्रगति भएको बताइएको छ । ० देखि ९ किलोमिटरसम्म कमजोर भू–बनोट भएकाले त्यहाँ पहिरोको थप मूल्याकंन गर्न समय लाग्ने देखिएको छ ।
बाँकी काम गर्न निर्माण व्यवसायीलाई दबाब दिइएको छ । आगामी जेठसम्म पहिलो ९ किलोमिटर र अन्तिम १५ किलोमिटर कालोपत्रे गर्न सकिने आयोजनाको दाबी छ । तर, अन्य ठाउँमा कामको गति निकै सुस्त छ ।
ठेवा पर्खाल, कटिङ, नाली लगायत संरचना बनाउन समय लाग्ने हुँदा ग्राभेल विच्छ्याउन र कालोपत्रेको काम छिटो नेपालको भनाइ छ । ग्राभेल गर्न दुवै ठाउँमा क्रसर स्थापना भइसकेको छ ।
दोस्रो प्याकेजका ठेकेदार प्रतिनिधि दिपक सापकोटाले ८ महिना थपिए सम्पूर्ण काम पूरा हुने दाबी गरे । २५ देखि ४० किलोमिटरसम्म आफ्नो आन्तरिक व्यवस्थापन भएकाले मिलाउन सकिने उनको भनाइ छ । पहिलो प्याकेजका प्रतिनिधि धर्मराज भण्डारीले भुक्तानी र काम गर्ने ठाउँ खाली नभएको बताए ।
दुवै जिल्लाका जनप्रतिनिधिको टोलीले २ साताअघि समस्याबारे मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्की, विभागका महानिर्देशक गोपालप्रसाद सिग्देललगायत उच्च अधिकारीलाई भेटी काम चाँडो पूरा गराउन आग्रह गरेका थिए ।